China Tunnel formwork mveliso kunye nabathengisi | Lianggong
Itonwork formwork luhlobo lwefomwork yohlobo oludibeneyo, oludibanisa iifomati zodonga oluphosiweyo kunye nolwakhiwo lomgangatho we-cast-in-place kwisiseko sokwakhiwa kwefomwork enkulu, ukwenzela ukuxhasa i-formwork kube kanye, tie ibha yentsimbi kube kanye, kwaye uthele udonga kunye nefomathi imilo kube kanye ngexesha elinye. Ngenxa yobume obongezelelekileyo bale formwork bufana netonela elixande, ibizwa ngokuba yi-tunnel formwork.
Itonwork formwork yinkqubo yefomwork enokusetyenziswa ngexesha lomjikelo oqhelekileyo ukuphosa iindonga kunye nokuyilwa kwenkqubo. Le nkqubo ivelisa ulwakhiwo olusebenzayo lokuthwala umthwalo olusetyenziswa ngokubanzi. Indawo yetonela yesithuba esingangeemitha ezi-2.4-2.6, isenza ukuba kube lula ukwahlula-hlula kunye nokwakha iindawo ezincinci.
Inkqubo yokwenziwa kwetonela isetyenziselwa ukuvelisa izakhiwo ezinjengezindlu, izindlu zasejele, kunye neehostele zabafundi ezinesakhiwo semonolitic. Kuxhomekeke kubukhulu besakhiwo, inkqubo yefomula yefomula ibonelela ngokulahlwa kwe-oor kwiintsuku ezi-2 okanye ngosuku olunye. Izakhiwo eziveliswe yinkqubo yetonela yendlela ehlawula iindleko, ezinokumelana nenyikima, ezinomgangatho omncinci wokuveliswa kweemoto kwaye zinciphise iindleko zomsebenzi. Inkqubo yokwenziwa kwetonela ikhethwa nakwezomkhosi.
Iifomwork zilungiselelwe ngokukodwa iprojekthi nganye. Ubume obuphindaphindiweyo benkqubo kunye nokusetyenziswa kweefom esele zenziwe kunye nokomeleza imethi / iikheyi kuyenza lula yonke inkqubo yokwakha, ukuvelisa ukusebenza ngokutyibilikayo nangokukhawuleza. Ubuchule obusetyenzisiweyo sele buqhelekile kumzi mveliso, kodwa ngokwakhiwa kweetonela kuncinci ukuxhomekeka kubasebenzi abanezakhono.
Umgangatho uyaphuculwa ngaphandle kwesantya sokwakha. Ubuso obuchanekileyo, nkqu nobentsimbi yefomwork budala ukugqibelela, okusemgangathweni ophezulu okwaziyo ukufumana ukuhonjiswa ngokuthe ngqo kunye nobuncinci bokulungiselela (ingubo yeskim inokufuneka). Oku kunciphisa imfuno yokulandela ukuthengisa, oko ke kubonelela ngokonga iindleko kunye nokukhawulezisa yonke inkqubo.
Iibheyi ezinkulu ezakhiwe kusetyenziswa ifom yetonela zibonelela ngokuguquguquka okungafaniyo kuyilo nakwimeko yesakhiwo kwaye ivumela inqanaba eliphezulu lenkululeko ekubonakaleni kokugqibela.
Ifom yetonela inamaqonga asebenzayo kunye neenkqubo zokukhusela umda. Ukongeza, ukuphindaphinda, imeko enokuqikelelwa kwemisebenzi ebandakanyekayo ikhuthaza ukuqhelana nemisebenzi, kwaye, lwakuba uqeqesho lugqityiwe, imveliso iyaphucuka njengoko kuqhubeka ukwakhiwa. Imfuno encinci yezixhobo kunye nezixhobo xa uhambisa ifom yetonela iyawunciphisa ngakumbi umngcipheko weengozi kwindawo.
Egqithileyo Ngesanti kubunzulu baphantsi Auto Ukunyuka formwork
Okulandelayo: Umhambi weFomu yeCantilever